Yusuf Garaad: April 2014
Markii aan booliiska ka codsaday in ay haweenka carruurta wata ugu hormariyaan waxay ii sheegeen in ay haweenka oo dhami ay ragaa ka horreynayaan. Laakiin qolka sawirka iyo faraha lagu qaadayo intii aan ku jiray wiil iyo laba gabdhood ayaa nidaamkaa la marsiiyay, wiilkaana ka horreeyay gabdhaha. Haween badan oo aan weli habka la marsiinna wey hawirnaayeen.
Booliisku waxay noo sheegeen in raashinka laga dalbay sharikad gaar loo leeyahay, taas oo uu uga jeedo in raashinka tayadiisu ay wanaagsan tahay. Xilli raashin ma ahayn xilliga aan tegey, laakiin koobab meesha daadsanaa waxay ahaayeen kuwo tayo wanaagsan, nadiifna ah. Waxaa kale oo Booliisku ii sheegay in musquluhu ay wanaagsan yihiin welibana waxay damceen in ay i geeyaan, aniga ayaase ka gaabsaday.
Markii aan saaka Kasaraani tegey ilaa iyo hadda waxaa iga hor muuqda ilmaha yar ee qandhadu ay hayso oo haddana maxbuus ah, cid u maqanina aanay jirin. Keliyana u baahan sharciga hooyadiis ay haysato in lagu xaq dhowro. Nin Kenyan ah oo aan wada soconnay wuxuu igu yiri, ilmahaas yar in uu meesha ku dhinto ayaan ka baqayaa.
Posted by Yusuf Garaad at 14:56:00
Hagi Abdirizak, oo ah saaxiibkeey Facebook ayaa su’aal i soo weydiiyay. Markii aan uga jawaabay, wuxuu i siiyay talo. Waan la dhacay taladii, Waxaan markaas fasax uga qaatay in aan la wadaago saaxiibbadeyda kale ee saxaafadda bulshada.
Waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta Soomaliyeed ee aan ku taxanahay ama kala socdo marba xaaladda dalka.
Jaraa’idka Soomalida kalsooni kuma qabo, mana aamino waxa ay qoraan illaa aan ka aqriyo source wanaagsan.
John Hobbes baa qoraalkiisa Leviathan ku yiri "ummad walba waa laga maarmaan in ay hesho "Social contract" haddeyse umadi ku guulaysan kari weyso, waxay ku noolaataa gaajo, cabsi iyo dagaallo joogta ah.
Ummaddana xaalaaddaa kama baxdo illaa iyo inta ay hesho "heshiis mujtamaceed" oo ka turjumayo iimaankooda iyo dhaqankooda....
Waxaan aaminsanahay in 1980 iyo jabhadahii "isbaddal doonka" illaa iyo maanta iyo doodda siyaaseed "federal haa ama maya?" Ay ka turjumeyso in aan wali baadi goob ugu jirno "heshiis mujtamaceed".
Waxaa iga talo ah, kalsoonina aan ku qabo garashada aad u leedahay arrinkan.
Socrates baa qoraaladiisii ugu caansan mid ka mid ahaa uu ragga 3 u qeybiyay.
1) Rag ka dooda aragtiyada.
Tusaale: federaal haa ama maya!?
2) Rag ka dooda dhacdooyinka
Tusaale: diyaaraddii Maleysia way luntay iyo maysan lumin ee waa been!!
3) Rag ka dooda ragga kale
Tusaale: Xasan Sheikh baa saxsan maya Cumar Cabdirashiid baa saxsan!!
Markaa buu yiri ragga sadaxaad baa rag ugu liita.
Waxaad heysaysaa fursad in badan aysan haysan. Ilaahay wuxuu kugu mannaystay awood aad umadda isugu soo dhaweyn kartid ama ku kala fogeeyn kartid.
Hana illooobin eraydii Rasuulka caleyhi wassalaam:
"Mid walbaa waa mas'uul, mid walbana waxaa laga wareysan mas'uuliyadii uu qaaday.."
Aabbaha waxaa laga wareysan aqalkiisa iyo reerkiisa, hogaamiyahana waxaa laga wareysan shacabkiisa.
Mahadsanid jawaabtaada. Kheyr iyo guul baan ku rajeynayaa.
Posted by Yusuf Garaad at 14:04:00
Waa Qaybta Koowaad ee Qormadeyda taxanaha Xamar Lagaama Xigo, oo aan ka soo min guuriyay Facebook. Waxay wadataa aragtiyadii laga bixiyay, intii qof ee like tiri iyo weliba intii sii faafisay.